उपत्यकाको फोहोर फागुनदेखि बन्चरेडाँडामा | ईमाउण्टेन समाचार
काठमाडौं, १९ पुस । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला आउँदो फागुनदेखि बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट लैजाने तयारी भएको छ । नुवाकोटको ककनी–२, बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको सेल नं. १ माघ अन्तिमसम्म तयार हुने जनाइएको छ ।
आगामी फागुन १ देखि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न दिने तयारी भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । बन्चरे डाँडा काठमाडौँबाट २७ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालका अनुसार तत्काल फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयार पार्नुपर्ने भएकाले यो ल्यान्डफिल साइट दुई भागमा विभाजन गरी निर्माण हुँदैछ ।
पहिलो चरणमा सेल नं. १ मा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै सेल नं. २ को बाँकी काम गरिनेछ । अब कुनै पनि बहानामा काम नरोकी समयमै निर्माण सम्पन्न गरी व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण गरिने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित एक हजार सात सय रोपनी जमिन ओगटेको महानिर्देशक गेलालले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये १०४ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा फोहोर फाल्ने सेल बनाइनेछ । जमिनको भागमध्ये ४० प्रतिशत भागमा हाल ल्यान्डफिल साइटको सेल नं. १ तयार हुँदैछ ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
वामदेवको सर्त अस्वीकार, नारायणकाजी विनासर्त तयार
बन्चरे ल्यान्डफिल साइटको काम रोक्ने चेतावनी
सिसडोल भरियो, फोहोर कहाँ फाल्ने ?
प्रदूषणले लक्ष्मण रेखा नाघ्यो, श्वास फेर्न अनुपयुक्त
राजधानीको फोहोर फाल्न नयाँ ठाउँको खोजी
प्रदूषण बढाउने सवारीलाई ‘नो इन्ट्री’
झापाका स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नै सकेनन्